Sudan oo cadaadis ku ogolaatay sii deynta haweeney ka baxday diinta Islaamka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Khartuom – Mareeg.com: Dowladda Sudan ayaa ogolaatay iney sii deyso haweenay lagu xukumay dil kaddib markii lagu helay dambi ah in ay isaga baxday diinta Islaamka, sidaasi waxa sheegay sarkaal ka tirsan wasaarada arrimaha dibedda oo lagu magacaabo Abdullahi Alzareg.
Meriam Ibrahim oo ah haweeneyda ka baxday diinta Islaamka, islamarkaana guursatay nin Kishitaan ah oo u dhashay Koonfurta Sduan ayaa waxay ku umushay xabsiga gudahiisa, iyadoo dhashay gabar. Haweeneyda ayaa diiday iney ka laabtao diinta masiixiga, waxaana lagu xukumay dil.
Abdullahi Alzareg ayaa BBC-da u sheegay in haweenaydan la sii daan doono maalmaha soo socda, isagoo xusay in dalkiisu uu ilaaliyo xoriyadda qofka u leeyayahay in uu raaco diintii uu doono, isla markaasna ay xukuumadu badbaadin doonto haweenaydaasi.
Sudan waxa soo wajahday cambaareyn caalami ah kadib markii ay maxkamadi xukunka dilka ah ku riday gabadhaasi oo ku dooday iney kusoo barbaartay gaalnimo.
Ra’iisal wasaaraha Britain David Cameron ayaa waraysi uu siiyey wargayska the Times, ku sheegay in xukunkaasi yahay mid arxan daro, waxa uuna intaasi ku daray in xukunkaasi yahay mid aanan la jaan qaadi kareynin dunida manta jirta, sida uu yiri.
Meriam, oo da’adeedu 27 sanno tahay, ayaa waxa lagu soo barbaariyey diinta masiixiga, balse garyaqaan reer Sudan ah ayaa bishii hore go’aamiyey in ay tahay in loo aqoonsado haweenaydaasi qof Muslim ah oo ka baxday diinta Islaamka, maadaama aabaheed Muslim yahay.
Maxkamada ayaa sheegatay in loo ogolaan doono in ay koriso gabadheeda muddo laba sanno ah ka hor inta aanan lagu fulinin xukunkaasi dilka ah, hase ahaatee xukuumadda Sudan ayaa shaacisay in laga laabtay xukunka dilka ah.
Dalka Sudan waxa u badan dad Muslim ah, shareecada Islaamkana waxa laga dhaqmayey tan iyo 1980-tamaadkii, waxaana loo aaneynayaa sababta Sudan u go’aansatay sii deynta haweeneydan mid ku timid cadaadis uga yimid caalamka.